Ejipta: Afaka i Kareem Amer! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2010 17:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
[Rohy amin'ny teny Arabo na Anglisy] Taorian'ny 1470 andro nolaniany tany am-ponja, afaka ihany nony farany ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy Kareem Amer. Nihoatra 10 andro amin'ilay efatra taona voatondro hohefainy noho ny faniratsirana ny Silamo sy ny Filohan'i Ejipta Mohammed Hosni Mubarak tao amin'ny bilaoginy (Ar) izany.
Tsy ela akory taorian'ny fisamborana azy, mafàna fo maro erantany no niketriketrika ny fanafahana azy, nanokana bilaogy iray ho fametrahana ireo fanavaozam-baovao matetika, kaonty Twitter iray, nandefa fanangonan-tsonia iray taorian'ilay iray taloha ary nikarakara famoriana olona atao hoe Free Kareem nanoloana ireo Masoivoho Ejiptiana manerana izao tontolo izao.
Ao amin'ny @freekareem dia mafy sy mazava ny hafatra:
AFAKA I KAREEM AMER!
Ary ny bilaogy Free Kareem dia manazava bebe kokoa:
Efa afaka izao i Kareem Amer, hoy ny namana akaiky an'i Kareem mitatitra.
Mandà ny hiresaka aman'olona aloha i Kareem amin'izao fotoana, na izany aza dia nampitony ireo mpanohana azy izy nilaza fa salama tsara. Alohan'ny hitenenany zavatra dia te-hanana fotoana ho azy manokana aloha ity lehilahy manam-pahasahiana ity.
Hajainay tanteraka ny fanirian'i Kareem, ary izany no antony angatahanay aminao, raha mpanao gazety na mpitoraka bilaogy ianao, mba hanàja koa ny fanirian'i Kareem, mandrapaha-tongan'ny fotoana nofinidiny hitenenana.
Ndeha hankalazaintsika dieny izao anio izao ny fahafahan'i Kareem !
Ilay lahatsoratra dia manohy amina fisaorana mitafotafo ho an'ireo rehetra nankahery an'i Kareem tamin'ny adiny, izay Abdul Kareem Nabeel Sulaiman no tena anarany:
Ireo mpitantana ny FreeKareem.org dia tsy te-hamela handalo fotsiny ity vintana sarobidy loatra ity, ary misaotra ny tsirairay nanohana an'i Kareem tamin'ny ady nataony manohitra ny fitsarana mitanila sy ny famonjàna an-terisetra. Fisaorana ho an'ireo mafàna fo nanohana ny ezakay ho an'i Kareem nandritra ny 4 taona sy 10 andro katroka! Tsy ho vitanay ny hitanisa ny anaran'ny tsirairay etoana, tsy hoe sahirana fotsiny izahay, fa satria koa tena tsy tambo isaina ny isan'ireo mpanohana. Fisaorana ho an'ny tsirairay nanao hetsika nanohitra, nampita, nanohana, nanao tolotra, nanoratra, nizara, ary nandefa tweets momba an'i Kareem koa aza nanerana izao tontolo izao! Misaotra betsaka anareo indrindra!
Raha ny voalazan'ny Arabic Network for Human Rights Information, nafàhana tamin'ny 6 Novambra teo avy any amin'ny fonjan'i Borj Al Arab i Kareem, toerana nihazonana azy, saingy avy eo dia notazonin'ny Sampam-pitsikilovan'ny Fanjakana tao Alexandria, toerana eritreretina ho nidarohana azy, hoy ny bilaogy Free Kareem nanampy.
Tamin'izany, ny fanjavonany nandritra ny folo andro dia nampisavoritaka ireo mpanohana sy ireo mafàna fo niady ho amin'ny famotsorana azy.
Tao amin'ny Facebook, fanentanana iray no nalefa, nitondra ny lohateny hoe Hoatrinona ho takalon'ilay Mpitoraka bilaogy?
Nalaina an-keriny i Kareem Amer ary nodarohan'ny Sampam-piarovam-panjakana, ary tena tandindonin-doza tokoa ny ainy.
Meteza ho mpanelanelana ka mirotsaha avy hatrany amin'ny Facebook Ransom Campaign. Ampio izahay hanavotra ny ainy!
Alaa mangataka torohevitra ao amin'ny Twitter mikasika izay tokony hatao hanalàna ny vesatra mahazo an'i Kareem
Ary tao amin'ny Twitter, ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy ela nihetezana, Alaa Abd El Fattah dia manontany:
الناس بتسأل ايه اللي ممكن يتعمل عشان كريم و أنا خايف يتوه في هوجة الانتخابات هل من نصائح؟
Manontany izay tokony hatao ho an'i Kareem ny olona, raha izaho kosa manahy ny mety hanadinoana azy mandritry ny fotoam-pifidianana. Manana torohevitra ve?
Dia mamaly i Mohammed Maree:
وفى امكانية لتنظيم وقفة احتجاجية فى مصر وتكون متزامنة مع وقفة امام معظم السفارت والقنصليات المصرية بالخارج
Mety ho misy azo atao ihany toy ny fikarakarana fitorevahana (sit-in) ao Ejipta izay hifanindran-dàlana amin'ny fanaovana famoriana olona any amin'ireo Masoivoho Ejiptiana any ivelany.
Azo jerena eto ny famintimpitinana ny antom-pamonjàna an'i Kareem sy ny fotoana nijanonany tany.